कसरी ब्लुटुथ भुक्तानहरू नयाँ फ्रन्टियरहरू खोल्दै छन् | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 3, 2021 बिहीबार, डिसेम्बर 2, 2021 सेसी बोन्सी
लगभग सबैजना रेस्टुरेन्टमा खाना खान बस्दा अर्को एप डाउनलोड गर्न डराउँछन्।
Covid-19 ले कन्ट्याक्टलेस अर्डर र भुक्तानीहरूको आवश्यकतालाई बढायो, एप थकान एक दोस्रो लक्षण भयो। ब्लुटुथ टेक्नोलोजीले यी वित्तीय लेनदेनहरूलाई लामो दायराहरूमा टचलेस भुक्तानीहरूलाई अनुमति दिएर, अवस्थित एपहरूलाई त्यसो गर्नको लागि लाभान्वित गर्न सेट गरिएको छ। भर्खरैको एक अध्ययनले कसरी महामारीले डिजिटल भुक्तानी प्रविधिहरू अपनाउने कार्यलाई द्रुत बनायो भनेर वर्णन गरेको छ।
4 मध्ये 10 अमेरिकी उपभोक्ताहरूले Covid-19 हिट भएदेखि आफ्नो प्राथमिक भुक्तानी विधिको रूपमा कन्ट्याक्टलेस कार्ड वा मोबाइल वालेटहरूमा स्विच गरेका छन्।
भुक्तानी स्रोत र अमेरिकी बैंकर
तर कसरी ब्लुटुथ टेक्नोलोजीले अन्य कन्ट्याक्टलेस भुक्तानी प्रविधिहरू जस्तै QR कोडहरू वा नजिक-क्षेत्र सञ्चार (NFC)?
यो सरल छ: उपभोक्ता सशक्तिकरण। लिंग, आम्दानी र समुदायले मोबाइल भुक्तानी प्रविधि प्रयोग गर्न उपभोक्ता कत्तिको इच्छुक छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ। तर सबैजनाले ब्लुटुथमा पहुँच गरेको हुनाले, यसले भुक्तानी विधिहरूमा विविधता ल्याउने आशाजनक सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ र विभिन्न जनसंख्यामा पुग्ने सम्भावना छ। यहाँ कसरी ब्लुटुथले वित्तीय समावेशीकरणको लागि नयाँ सीमाहरू खोल्दैछ।
सम्पर्कविहीन भुक्तानीहरू प्रजातन्त्रीकरण गर्दै
Covid-19 ले पोइन्ट अफ सेलमा कम शारीरिक सम्पर्कको रूपमा कन्ट्याक्टलेस भुक्तानीहरूप्रति उपभोक्ताहरूको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्‍यो (POS) आवश्यकता बनेको छ । र त्यहाँ कुनै पनि फिर्ता जाने छैन - द द्रुत ग्रहण डिजिटल भुक्तानी प्रविधिहरू यहाँ रहन को लागी छ।
परिस्थितिलाई साथमा लिऔं माइक्रोचिपको अभाव जसले आपूर्तिलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । यसको मतलब कार्डहरू गायब हुनेछन् पहिले नगद र, फलस्वरूप, यसले बैंक खाताहरूमा मानिसहरूको पहुँचमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। तसर्थ, यो हुनु अघि भुक्तान प्रक्रियाहरू सुधार गर्न वास्तविक अत्यावश्यकता छ।
त्यसपछि, क्रिप्टोकरन्सीको साथ पनि, त्यहाँ एक अनौठो द्विविभाजन छ। हामीसँग मुद्राको डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएको मूल्य छ, यद्यपि यी सबै क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू र वालेटहरू अझै पनि डिप्लोइ र कार्ड जारी गर्छन्। यस मुद्राको पछाडिको प्रविधि डिजिटल हो, त्यसैले यो बुझ्न नसकिने देखिन्छ कि त्यहाँ डिजिटल भुक्तानी गर्ने तरिका छैन। के यो खर्च हो? असुविधा? वा अविश्वासको लागि तल?
जबकि एक वित्तीय संस्थाले सधैं व्यापारी सेवाहरू प्रयोग गर्ने तरिकाहरू हेरिरहेको छ, तिनीहरू टर्मिनलहरूमा आफ्नो हात प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यहि ठाउँमा अगाडि-अन्तमा सकारात्मक अनुभवहरू प्रदान गर्न वैकल्पिक विधिहरू आवश्यक छ।
यो ब्लुटुथ टेक्नोलोजी हो जसले व्यापारीहरू र ग्राहकहरूलाई पहुँच, लचिलोपन, र स्वायत्तता दिन्छ जसरी उनीहरूले एक अर्कासँग मूल्य आदानप्रदान गर्न छनौट गर्छन्। कुनै पनि भोजन वा खुद्रा अनुभव सुव्यवस्थित गर्न सकिन्छ किनकि त्यहाँ विभिन्न एपहरू डाउनलोड गर्न वा QR कोड स्क्यान गर्न आवश्यक छैन। घर्षण घटाएर, यी अनुभवहरू सुविधाजनक, समावेशी र सबैको पहुँचमा हुन्छन्।
विभिन्न प्रकारका ह्यान्डसेटहरूमा सर्वव्यापीता
उदीयमान बजारहरू र तल्लो सामाजिक-आर्थिक समुदायहरूलाई अवलोकन गर्दा, उनीहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा परम्परागत वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहिर राखिएको स्पष्ट हुन्छ। यो किनभने NFC प्रविधि, जस्तै Apple Pay, सबै यन्त्रहरूमा समर्थित छैन र सबैले iPhone किन्न सक्दैनन्। यसले प्रगतिलाई सीमित गर्दछ र विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक्समा पहुँच भएको अभिजात वर्गका लागि निश्चित सुविधाहरू र सेवाहरू आरक्षित गर्दछ।
सर्वव्यापी देखिने QR कोडहरूलाई पनि उच्च गुणस्तरको क्यामेरा चाहिन्छ र सबै ह्यान्डसेटहरू त्यस प्रकार्यले सुसज्जित हुँदैनन्। QR कोडहरूले मात्र मापनयोग्य समाधान प्रस्तुत गर्दैन: ग्राहकहरू अझै पनि लेनदेनको लागि कोडको नजिक हुनुपर्दछ। यो या त कागजको भौतिक टुक्रा वा हार्डवेयर हुन सक्छ जसले क्यासियर, व्यापारी र उपभोक्ता बीच मध्यस्थको रूपमा कार्य गर्दछ।
उल्टो, विगत दुई दशकदेखि, निम्न-गुणस्तरका उपकरणहरू सहित प्रत्येक ह्यान्डसेटमा ब्लुटुथ सक्षम गरिएको छ। र यसको साथमा ब्लुटुथ मार्फत वित्तीय लेनदेनहरू सञ्चालन गर्ने अवसर आउँछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिले पहुँच बाहिर रहेको प्रविधिको फाइदा लिन अनुमति दिन्छ। यो उपभोक्ता सशक्तिकरणको बराबर हो किनकि हार्डवेयर पूर्ण रूपमा हटाइन्छ र लेनदेनमा व्यापारीको POS र ग्राहक मात्र समावेश हुन्छ।
ब्लुटुथले महिलाहरूको लागि थप अवसरहरू ल्याउँछ
महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी चासो देखाउँछन् अनलाइनको लागि मोबाइल वालेट प्रयोग गर्दै र इन-स्टोर खरिदहरू तर करिब 60% भुक्तानी निर्णयहरू महिलाहरूद्वारा गरिन्छन्। यहाँ महिलाहरूका लागि नयाँ, उदीयमान प्रविधिहरूको शक्ति बुझ्ने एउटा विच्छेद र ठूलो अवसर छ।
भुक्तानी प्रविधिको डिजाइन र UX प्रायः पुरुषहरूद्वारा डिजाइन गरिएको हो र, सम्पत्ति सिर्जना वा क्रिप्टोकरेन्सीलाई हेर्दा, यो स्पष्ट छ कि महिलाहरूलाई छोडिएको छ। ब्लुटुथ भुक्तानीहरूले महिलाहरूलाई सजिलो, घर्षणरहित, र थप सुविधाजनक चेकआउट अनुभवहरू सहित समावेशीता प्रदान गर्दछ।
टचलेस भुक्तानी अनुभवहरू सक्षम गर्ने वित्तीय प्रविधि प्लेटफर्मको संस्थापकको रूपमा, विशेष गरी उदीयमान बजारहरूमा UX निर्णयहरूका लागि महिलाहरूलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले यो पनि महसुस गर्यौं कि यो भुक्तानी उद्योगमा नेटवर्कहरूसँग जडान मार्फत महिला कार्यकारीहरूलाई काममा राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। युरोपेली महिला भुक्तानी नेटवर्क*.
विगत दशकमा, उद्यम पुँजी सम्झौताहरूको प्रतिशत जुन महिला संस्थापकहरूमा गएको थियो दुबै। र उपलब्ध केही उत्कृष्ट एपहरू या त महिलाहरूद्वारा डिजाइन गरिएका छन् वा भुक्तानी प्रबन्धकको भूमिकामा महिलाहरू छन्। Bumble, Eventbrite, र PepTalkHer सोच्नुहोस्। यसलाई ध्यानमा राख्दै, महिलाहरू पनि ब्लुटुथ क्रान्तिको अग्रभागमा हुनुपर्छ।
ब्लुटुथको साथ नवीनतम प्रगतिहरूले व्यापारीको POS उपकरण, हार्डवेयर टर्मिनल, वा सफ्टवेयरबाट सिधै एप्लिकेसनमा सञ्चार गर्न सक्छ। अवस्थित मोबाइल बैंकिङ एपलाई ब्लुटुथको सर्वव्यापी प्रकृतिसँग जोडिएको, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिङ्ग र ट्रेडहरूको दायराका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न ब्लुटुथ मार्फत कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने विचार।
Bleu भ्रमण गर्नुहोस्
* खुलासा: EWPN अध्यक्ष Bleu मा बोर्डमा बस्छन्।
टैग: स्याउ भुक्तानBleuब्लूटूथब्लुटुथ भुक्तानीसम्पर्कविहीनसम्पर्क रहित भुक्तानकोविड - १।cryptocurrencyडिजिटल भुक्तानीडिजिटल भुक्तानी प्रविधिहरूउभरिएका बजारहरूयुरोपेली महिला भुक्तानी नेटवर्कवित्तीय प्रविधिfintechमोबाइल भुक्तानी प्रशोधनमोबाइल भुक्तानीमोबाइल वालेटक्षेत्र संचारको नजिकnfcमहामारीभुक्तानी प्रक्रियाभुक्तानी स्रोतस्थानQR Codeuxux निर्णयहरू
सेसी मोबाइल टेक्नोलोजी र पूर्वाधारका क्षेत्रमा उच्च दक्षता र ज्ञान भएका वकिल हुन् जसमा विश्वव्यापी दूरसञ्चार नियमहरू, मोबाइल भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय नियमहरू, एम-कमर्स, र सामाजिक वाणिज्य नियमहरूमा सीमित छैन। उच्च व्यापार विश्लेषण कौशल र मोबाइल प्रविधिमा व्यापार प्रक्रियाहरू विश्लेषण र सुधार गर्ने क्षमताको साथ सक्रिय र उत्प्रेरित टोली खेलाडी। भुक्तान प्रविधिमा दुईवटा पेटेन्टहरू छन्। भिसा टेक्नोलोजी पार्टनर, र FIS Fintech Accelerator Cohort 1 संस्थापक। उद्यमशीलता, व्यापार, कानून, र संगठनात्मक संरचना मा एक विविध पृष्ठभूमि संग प्रभावकारी र लगनशील पेशेवर।